Igumbi leprimiyamu elinesimo somoya kwindawo ezolileyo - I-Airbnb
Igumbi leprimiyamu elinesimo somoya kwindawo ezolileyo
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguJibu
Eli ligumbi elinomoya wokuqala elinomoya onebhedi ephindwe kabini. Igumbi lixhotyiswe nge-laptop friendly indawo yokusebenza, izitulo kunye nedrowa.Iifestile zegumbi zivula igadi. Kukho indlu yangasese/ishawa encanyathiselweyo enezixhobo zale mihla.
Isithembiso sethu kukubonelela ngokhathalelo olukhulu, intuthuzelo kunye noxolo onokuthi ulufumane kwihotele ekumgangatho weenkwenkwezi, kunye nokuchukumisa ubuntu kunye nokunxibelelana okuhambelana neHomestays. Sibonelela ngesidlo sakusasa seKerala esiphekwe ekhaya njengesiqhelo.
Eli ligumbi labucala kumgangatho wokuqala wendlu. Sifumaneka kumgama oziimitha ezingama-300 ukusuka kwindawo ephambili yeCochin-Calicut-Mangalore Thondayad bye pass.
Igumbi linokuthatha abantu abathathu abona baninzi. Ukuba kukho umntu wesithathu kwigumbi, sinokunika ibhedi eyongezelelweyo phantsi, ukuba kuyimfuneko. Kukho indawo yokuhlala eqhelekileyo kunye neebhalkhoni ezimbini kumgangatho wokuqala. Umabonwakude ukhona kwindawo yokuhlala. Ibalcony ilungile ngokwaneleyo ukuba kufundwe ikomityi yeti okanye incwadi.
Sibekwe kwindawo eluhlaza eKuruvananchery Thayam, Kudilthodu, kufutshane nesibhedlele sokhathalelo lweenkwenkwezi eThondayad bye pass.
Ikhaya lethu liphantse libe yi-300 yeemitha kude neyona ndawo iphambili iThondayad Byepass kwaye ikude nesiphithiphithi sedolophu. Njengendawo yokuhlala, kukhuselekile kuwe ukuba uhambe ngendlela ngamaxesha onke, nangona kunjalo siyakucela ukuba usazise kwangaphambili ukuba usebusuku kakhulu.
Kukho iindawo zokutyela ezimbalwa phakathi kweekhilomitha ezimbini ukufikelela. Nceda uthethe nathi ngeengcebiso ezilungiselelwe wena.
Umbuki zindwendwe ngu- Jibu
Ndihlala kude kwaye ndinqwenela ukunxibelelana nondwendwe ngalunye ngokuxhomekeke kumanqanaba abo okuthuthuzela. Kuyavuyisa ukubanceda ukuba bacwangcise uhambo losuku okanye balungiselele i-cab. Ndiza kufumaneka kwifowuni nanini na ngelizwi okanye ngetekisi.
U-Salija, u-Suresh kunye no-Sonu baya kuba khona kwindlu yeendwendwe ukuze bakuncede ngexesha lokuhlala kwakho. Yindlu yabo kwaye bahlala khona ngokwabo.
Ndihlala kude kwaye ndinqwenela ukunxibelelana nondwendwe ngalunye ngokuxhomekeke kumanqanaba abo okuthuthuzela. Kuyavuyisa ukubanceda ukuba bacwangcise uhambo losuku okanye balung…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kozhikode